Kufamba Kubva kuParis Ku Amsterdam Na Chitima In 3 maawa | Save A Train
musha > Travel Europe > Kufamba Kubva kuParis Ku Amsterdam Na Chitima In 3 maawa
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi(Last Updated On: 14/05/2020)
Ichokwadi kuti pane zvakawanda pane imwe nzira kusvika Amsterdam kubva Paris. Uye apo vose kuuya avo aifarira nezvayakaipira, vanofamba nechitima kubva Paris kuna Amsterdam anoramba zvakanakisisa zvaungaita kana iwe kuti enzaniso. Tinopa iwe zvose zvikonzero chitima kufamba zvinofanira kuva sarudzo yako yokutanga, kunyanya kana uchida kusvika Amsterdam kubva Paris zvakanaka uye manyorerwo nenyaradzo.
Paris kuna Amsterdam nechitima Vs. Other Modes pamusoro Travel
Kufamba nemotokari kubva kuParis kuenda kuAmsterdam pasina mubvunzo a wakajeka fambisa. zvisinei, zvinoita kuti musoro kana iwe unogona kutenga nguva uye vane chivimbo zvakakwana kufamba mumigwagwa pakati maguta maviri.
Zvisinei izvo nzira iwe tora ako motokari rwendo kubva Paris kuna Amsterdam, pane motorways, mutero, uye mafuta kunwa kufunga pamusoro. The nemotokari anogona kutora kusvika 6 maawa, panguva yakanakisisa; saka iwe unenge vanofanira kuronga yenyu zororo kwamira. wo, funga chero SERVICING uye mafuta inodiwa nenzira, uyewo yokuzorora. mari yose avo anogona uye kuchawedzera kumusoro.
Unogona kufunga achitora bhazi nekuti waita akazvinzwa Ndiyo yakachipa pashiri nzira kuenda Amsterdam kubva Paris. Nepo izvi ichokwadi, rwendo achatora dzinenge 7 maawa. Ndizvo nguva refu kuti mumugwagwa. Zvichaita sokuti akatowanda nokuti uri kutsvikinyidzika ari bhazi dzine nzvimbo famba.
Kunewo kusarudza kubhururuka kubva Paris kuna Amsterdam. Asi apo kubhururuka zvichaita chete kutora awa uye 15 maminitsi, haapi madhiri akafanana nekufamba nepasi. Kutoti uri First Class, uchawana pachako vakatutirana mu dzamira ndege zvigaro.
Panewo hapana chakanaka European girl kunakidzwa kana iwe kufamba nendege. Uchava kunyanya vane makore panze kuti kutarisa kana iwe zvichaitika kuti vagere vakaita hwindo chigaro; zvimwe, unogona kuvimba riri mu-ndege bhaisikopo akuchengete vakagamuchira. Uye musakanganwa kuti apo kufamba nendege ndiyo hunonzi ari uchitsanya dzekuendesa Amsterdam kubva Paris, uchiri kuda chinokonzera nenguva uye mari zvichakutorera kusvika yendege.
Iko Nyaradzo uye Kashoma kweParis kuenda kuAmsterdam neTreni
Kana zvasvika pakufamba kubva kuParis kuenda kuAmsterdam, kufamba kwechitima neThalys zvitima zvinopa zvakanakisa zvepasirese. Ndicho arguably kupfuura hwomutambarakede uye zvakakunakira nzira kufamba kunokwana kudzidzisa mukuru-nokukurumidza. Unogona kufamba-famba muchitima nyore nyore usati waona kuti iri kufamba.
Iwe uchanzwawo wakachengeteka uchifamba nechitima, muchiziva hausi kugoverana migwagwa mikuru pamwe vatyairi kutyaira. Uye panguva aimhanya 300 ? km paawa, wasvika yako rwendo hafu panguva zvaizotora nemotokari kana bhazi. High-nokukurumidza nezvitima vanogona kuwana kuti Amsterdam kubva kuParis iri 3 maawa uye 19 maminitsi. Uye kusiyana nekufamba nendege, iwe uchava yevedza European mumaruwa kunakidzwa.
Bhuku rako chitima matikiti pachine, uye iwe unogona kunakidzwa yakachipa pashiri prices, Kugadzirwa kufamba vadzidzise mari zvikuru kusarudza kana waronga.
Nekufamba ne Thalys zvitima, unogona kutenga matikiti kusvika 90 mazuva asati enyu pakufamba musi uye nokuponesa kusvika 75% pamusoro chitima matikiti kana iwe kuchengetera zvigaro zvenyu mangwanani.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine batanidzo kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-paris-amsterdam-train%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#traveleurope europeantravel europetravel longtrainjourneys mazano trainjourney Tranride nezvitima traintip chitima mazano Train Travel chitima kufamba Mazano chitima rwendo famba travelamsterdam traveltips